ရေလွှမ်းမိုးခြင်းများ အကောင်းအဆိုး - ရေလွှမ်းမိုးမှုမှပေးသော ဆိုးကျိုးများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း - Myanmar Water Portal
ရေလွှမ်းမိုးခြင်းများ အကောင်းအဆိုး - ရေလွှမ်းမိုးမှုမှပေးသော ဆိုးကျိုးများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း
News Burmese Articles Water Themes Disaster & Flooding Basins Lower Ayeyarwady
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (International Water Management Institute - IWMI) သည် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ "ရေလွှမ်းမိုးမှုကို အခြေခံသော လယ်ယာမြေစနစ်" (Flood Based Farming System - FBFS)တွင် ဘက်ပေါင်းစုံပေါင်းစည်းလုပ်ဆောင်စေရေးကို အထောက်အပံ့ပေးမည့် "ရေလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံသော အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုအား စမ်းသပ်ခြင်း " ကိုစီမံလျက်ရှိပါသည်။
ဥရောပကော်မရှင်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်ပုံငွေ (International Fund for Agricultural Development - IFAD) ၏ရန်ပုံငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော ဤစီမံကိန်းသည် FBFSကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် နိုင်ငံတွင်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သုတေသနမိတ်ဖက်များကို အားပေးထောက်ပံ့ခြင်းအပါအဝင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ အချို့ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုများ၏ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုံခြုံမှု လျော့ကျစေရန် ခြိမ်းခြောက်နေသည့် အရေးကြီးသောကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ စိန်ခေါ်မှုများကိုပါ ဖော်ထုတ်ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ရေလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးစနစ် ဆိုသည် ရေရရှိနိုင်မှုအပေါ် တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းအားဖြင့် မှီခိုသော အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းနှစ်ခုမှာ သီးနှံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ကြက်၊ ဘဲမွေးမြူရေးအပါအဝင် အခြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ရေကို စားကျက်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း သောက်သုံးရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကြက်မွေးမြူရေး အပါအဝင် အခြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လူတို့ကစီမံခန့်ခွဲနေစဉ် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် ပတ်၀န်းကျင်ရှိ ဂေဟစနစ်များစွာကို အထောက်အကူပြုလျက်ရှိရာ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုများတွင်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအား ထုတ်လုပ်ဖန်တီးပေးသည်။ ထိုအထဲတွင် ငါးများအပြင် အခြားအစားအစာများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် အိုးအိမ်အတွက်ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။
ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် အာဟာရများကို မြေဆီလွှာတွင်ရေနှင့်တတူအနည်ထိုင်စေခြင်း ရေစီးတလျောက်ဖြန့်ဝေခြင်းတို့လုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့်မြေဆီသြဇာကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အရေးပါသည်။ ရေလွှမ်းမှုသည် မြေအောက်ရေ အရင်းအမြစ်များကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရာတွင်လည်း ‌အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် မြေပေါ်ရှိရေအရင်းအမြစ်များကို အစားထိုးဖြည့်စွက်ရန်အတွက် (ရေအရည်အသွေးသင့်လျော်ပါက) အသုံးပြု၍ရသည်။ထို့ကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးစနစ် သည် ရေလွှမ်းမှုမှပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်အကျိုးဆက်များကို အသုံးချရသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ပါ၀င်ပြီး အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောစနစ်ဖြစ်သည်။
မည်သို့သောအချိန်တွင် ရေကြီးမှုသည် မကောင်းသော ရေကြီးမှုဖြစ်လာသလဲ။
Men wade alongaflooded street at Kalay township, Sagaing division. Source: ABC News
လူများသည် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သော မိုးရွာသွန်းမှုပုံစံ၊ မြစ်ရေစီးဆင်းမှုနှင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုများကို လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်မှာ ယခင်ရာစုနှစ် များစွာကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဆိုသည်မှာ အလွယ်ပြောရသော် ပင်လယ်ထဲသို့စီးဆင်းသွားမည့် မြစ်များ၏အနိမ့်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသော ဒေသများပင်ဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် နှစ်စဉ်ရေလွှမ်းမိုးမှုများကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျိုးအဖြစ်ထွန်းဆုံးဒေသများဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ရှေးအကျဆုံးလူသားအခြေချနေထိုင်မှုအချို့သည် ငါးဖမ်းခြင်းနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းရေးကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် လွယ်ကူအဆင်ပြေသောကြောင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင် အခြေတည်ခဲ့ကြသည်မှာ အဆန်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်နေထိုင်ခြင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးများသကဲ့သို့ ဆုံးရှုံးမှုများလည်းရှိတတ်သည်။ ဥပမာ- ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အိမ်များနှင့်အခြားအခြေခံအဆောက်အအုံများ ပျက်စီးခြင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံများပျက်စီးခြင်းနှင့် လူတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။
လူများသည် ရေကြီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘေးဒုက္ခနှင့် အဆင်မပြေများကို လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်စေရန် အမြဲကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ ရိုးရှင်းသောဥပမာများမှာ ခြေတန်းရှည် သစ်သားချောင်းများပေါ်တွင် အိမ်များဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် လမ်းများရေအောက်ရောက်နေချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်လှေများကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လူနေအိမ်များမှရေလွှမ်းမိုးမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မိမိတို့အခြေချရာနေရာများရေမကြီးစေရေးအတွက် ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းပေးခြင်းတို့ကို အင်ဂျင်နီယာနည်းစနစ်များအသုံးပြု၍လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရေလွှမ်းမိုးဘေးဒဏ်ကြောင့် လူတို့အပေါ်ကျရောက်သော အခက်အခဲများကိုလျှော့ချရန် အရေးကြီးသောနည်းဗျူဟာများဖြစ်သည်။
ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း - ရေကြီးမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲ လူတို့အပေါ်ကျရောက်မည့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချခြင်း
ကြီးမားပြင်းထန်သော ရေလွှမ်းမှု၊ရေကြီးမှုများကြောင့် ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ပျက်စီးလေ့ရှိသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ဘ၀များတိုးတက်စေရေးအတွက် ရေကြီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အမှန်ပင်လိုအပ်သော်လည်း ရေစီးဆင်းမှုကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အတူပါလာသော အကျိုးကျေးဇူးများ၊၀န်ဆောင်မှုများကို မရည်ရွယ်ဘဲ သက်ရောက်မှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။
မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တစ်လျှောက် ရေစီးဆင်းပုံ၊ ရေပြန့်နှံ့ပုံကိုပြောင်းလဲခြင်းသည် ဥပမာအားဖြင့် ငါးနှင့်အခြားရေနေသတ္တဝါများရရှိနိုင်မှု ကိုပြောင်းလဲစေခြင်း၊ လယ်ယာမြေများအတွက် အရေးကြီးသောအာဟာရဓာတ်များရရှိမှု လျော့ကျစေခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝမရရှိတော့ခြင်းနှင့် မြေအောက်ရေအရင်းအမြစ်များကို မြန်ဆန်စွာပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်မှုမရှိခြင်းတို့ ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။
ထိုဖြစ်စဥ်များသည် ရေကြီးမှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရေကြီးခြင်းနှင့်အတူပါလာလေ့ရှိသော ကောင်းကျိုးခံစားခွင့်များကြား အလဲအလှယ်လုပ်ခြင်း၏ ဥပမာများပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာ အပြုသဘောဆောင်သည့်၀န်ဆောင်မှုများ ဖြစ်သည့် စားနပ်ရိက္ခာအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မှု၊ ရပ်ရွာလူထု၏အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမှုစနစ်များကို အထောက်အကူပြုမှုနှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများအကြား ကောင်းမွန်သည့် မျှခြေတစ်ခုရရှိနိုင်ရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။
Renewal of Wetlands - Source: Sciencing.com
Returning Nutrients to Soil - Source: Sciencing.com
Preventing Erosion and Maintaining Land Mass Elevation - Source: Sciencing.com
ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ တွေ့ကြုံခံစားနေရသော ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖြစ်သည့် ကောင်းကျိုးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များအကြား သင့်တော်ကောင်းမွန်သောမျှခြေအခြေအနေတစ်ခုရရှိစေရေးသည် IWMI နှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက်များ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းခေါင်းဆောင် Sanjiv de Silva က လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်တွင် ဖြစ်လာနိုင်မည့် ရေလွှမ်းမိုးမှုပုံစံနှင့် ပတ်သက်သည့်အပြောင်းအလဲများသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံးအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်နိုင်သည်ဟု ခံစားမိကြောင်း၊ ဤအပြောင်းအလဲများကို ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကလွှမ်းမိုးလိမ့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ယခုစီမံကိန်းသည် မည်သည့်ရေအသုံးပြုမှုကိုမဆို အသိအမှတ်ကာ၊ မည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုအဖြေရှာရန် မိတ်ဖက်များတည်ဆောက်မည်။ ထိုတည်ဆောက်မှုမှ အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုများပိုမိုနားလည်ရန်နှင့် ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ချက်များရှာဖွေဖို့ရာသတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေထုတ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် အားလုံးပါ၀င်မည့် တိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အလေးပေးသည်။
ဤရည်ရွယ်ချက်အရ ပိုးမွှားစီမံခန့်ခွဲမှုအပါအ၀င် တောင်သူလယ်သမားများအား စိုက်ပျိုးမှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခြင်းကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ ရေလွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ ပြောင်းလဲခြင်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာရန်အတွက် ရေကြီးမှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို remote sensingနည်းပညာကိုသုံး၍လည်းကောင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပိုမိုအာရုံစိုက်စုဆောင်းခဲ့သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ မြို့နယ်များစွာမှ စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှအရာရှိများနှင့် ဆွေးနွေးပြီးနောက် ရေကြီးမှုဆိုင်ရာမြေပုံများကို စပါးစိုက်ရန်သင့်တော်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း ဖော်ဆောင်ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကာ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှအရာရှိများသည်လယ်သမားများအား ရေကြီးမှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ဤမြေပုံများအားအသုံးပြု၍ ကူညီလျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဤမြေပုံများရေးဆွဲနိုင်ရေးကိုလည်း IWMI ဦး ဆောင်သောရေ၊ မြေနှင့်ဂေဟစနစ်သုတေသနအစီအစဉ်မှထောက်ပံ့သည်။
IWMI သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်ငါးလုပ်ငန်းကိုအကူအညီပေး သည့် WorldFish နှင့်လည်းနီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ ဒေသတွင်းအသက်မွေး၀မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများတွင် ရေ၏အသုံးဝင်မှုကို ငါးဖမ်းခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှစ်ခုလုံးတွင် ပိုမိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရန်အတွက်ဆန်နှင့်ငါးနှစ်ခုလုံးအတွက် သင့်လျော်သောမြေပုံကို WorldFishမှဖော်ထုတ်ခဲ့ကာ ရေကြီးခြင်းကြောင့် စပါးစိုက်ရန် မဖြစ်နိုင်သောရေရာများအပြင် ဆန်-ငါးဗျူဟာအတွက် သင့်တော်သောနေရာများကိုပါ ဖော်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ဤစီမံကိန်းသည် WoldFish ဦးဆောင်သော Fish Agri-food Systems (FISH) သုတေသနအစီအစဉ်နှင့် ACIAR မှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော MyFish စီမံကိန်းမှပူးတွဲငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် အတူမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် စိုက်ပျိုးရေး ရေမြောင်းများအတွင်း ရေတံခါးများတည်ဆောက်ကာစိုက်ပျိုးရေးစနစ်အတွင်း ငါးလုပ်ငန်းတိုးတက်စေရေးအတွက်ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်း မှစတင်၍ "ရေလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံသော အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုအား စမ်းသပ်ခြင်း"သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်အထိ ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ရည်ညွှန်းထားသောမြေပုံများအပြင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုစနစ်နှင့် လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲကိုကျယ်ပြန့်စွာ မှတ်တမ်းတင်သည့် ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှု၈ခုကိုလည်းစီမံခဲ့သည်။ယင်းတို့အနက်အများစုကိုရန်ကုန်နှင့် ဟင်္သာတရှိတက္ကသိုလ် များ ပူးပေါင်း၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်းရလဒ်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Translated by Ko Si Thu Khant Min,amember of Myanmar Water Portal Translation Community
Source: Good Floods, bad floods: managing the negatives of floods while maintaining its many benefits - Myanmar Water Portal
Water levels in Sagaing and Nyaung-U now above dan...
A Young Water Engineer Shared Tips and Tricks of s...
Flooding Dams & Bridges Urban Development Integrated Water Resources Management Climate Change Groundwater Waste Water Drinking Water Water Quality Ecosystem Services